Rose of Sharon: January 2012
ဗီယက်နမ်နှစ်သစ်ကူးရာသီအတွက် ကျောင်းတွေမပိတ်ခင်နောက်ဆုံးနေ့က ခလေးတွေရဲ့ကျောင်းလွယ်အိတ်ထဲမှာ ကျောင်းကထည့်ပေးလိုက်တဲ့စာပါလာတယ်… ဖွင့်ဖတ်ကြည့်တော့ ကျောင်းလခတွေနောက်နှစ်တက်မယ်ဆိုတာရယ်… တက်မဲ့ကျောင်းစာရိတ်တွေရယ်… တကယ်ကို အံ့သြသွားမိတယ်….
ဒီကျောင်းလေးကိုပြောင်းလိုက်တာတစ်နှစ်ခွဲလောက်ဘဲရှိသေးတယ်… ခလေးတွေအရင်တက်တဲ့ကျောင်းက နှစ်နှစ်တစ်ခါ ကျောင်းလခတွေတိုးတိုးတောင်းတာကိုမနှစ်သက်တာရယ်… ဒီကျောင်းမှာ အရင်ကျောင်းကနဲ့မတူတဲ့ ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို သဘောကျလို့ရယ်…ဒီကျောင်းလေးကိုရွေးပြီးပြောင်းထားခဲ့တာ…
အဲဒီအရင်ကျောင်းက ၄နှစ်သားအရွယ်ကျောင်းခလ တစ်နှစ်စာ ဒေါ်လာ၆၀၀၀ အစား ဒေါ်လာ၈၀၀၀လောက်ဖြစ်သွားပြီး ၉နှစ်သမီးအရွယ်ကျောင်းလခတစ်နှစ်စာ ဒေါ်လာ၈၀၀၀ကျော်ကနေ ဒေါ်လာ၁၀၈၀၀ လောက်ဖြစ်သွားတယ်… ဒီတော့ နောက်နှစ်နှစ်မှာ ထပ်တက်ဦးမှာသိနေတာမို့ တခြားကျောင်းဘဲပြောင်းတော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်ကြိုက်တွေ့ဘို့ကျောင်းကိုရှာခဲ့ရပါတယ်…
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲမှာ အကျင့်စာရိတ္တအတွက် တစ်ဘာသာထည့်သင်တာကို အရမ်းနှစ်သက်မိတယ်… ပြီးတော့ ပြင်သစ်စကားလဲ ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့သင်တာကိုလဲ သဘောကျတယ်… အဲဒါအပြင် ကျောင်းလခကလဲ ၄နှစ်သားအတွက် ဒေါ်လာ၄၉၅၀ ဖြစ်ပြီး ၉နှစ်သမီးအတွက်က ဒေါ်လာ၈၉၀၀ ဆိုတော့ အရင်ကျောင်းနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် တော်တော်သက်သာတယ်… ဒီကျောင်းက အသစ်ဖွင့်တဲ့ကျောင်းမို့ ကျောင်းလခလျှော့ပေးထားတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂မှာ ကျောင်းလခတိုးရင်တိုးမယ်… လျှော့ရင်လည်းလျှော့မယ်လို့ ကြိုပြောထားပါတယ်… ကိုယ်ကတော့ လျှော့မှာတော့မဟုတ်ဘူး တိုးဘို့ဘဲရှိမှာလို့ ကြိုတွေးထားပါတယ်… တိုးခဲ့ရင်လည်း ခလေးတွေကို ဒီကျောင်းမှာဘဲအထက်တန်းပြီးတဲ့ထိထားဘို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်… ကျောင်းရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုနှစ်သက်လို့ပါ….
တကယ်တမ်းတိုးပြီဆိုတဲ့စာရတော့… ဘုရား ဘုရား ဆိုပြီး မျက်လုံးပြူးသွားတယ်… နည်းနည်းနောနောတိုးတာမှမဟုတ်ဘဲ… နောက်နှစ်စာသင်နှစ်မှာ ၆နှစ်အရွယ်သားအတွက် ဒေါ်လာ၁၀၈၀၀ လောက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ၁၁နှစ်အရွယ်သမီးအတွက် ဒေါ်လာ၁၃၀၀၀နီးပါးပေးရမှာဖြစ်တယ်…. ဒါ့အပြင် admission fee တွေလဲ ထပ်ပေးရမှာဆိုတော့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ပေါင်းကို ဒေါ်လာနှစ်သောင်းခွဲလောက်သွင်းရမှာဖြစ်တယ်…
ဗီယက်နမ်မှာနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားခလေးတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး… International School ဘဲတက်စရာရှိပါတယ်… တခြားဈေးနဲနဲပိုသက်သာတဲ့ကျောင်းရှာရင်ရနိုင်ပေမဲ့ ခလေးတွေဘဝမှာ ခဏခဏ အပြောင်းအလဲတွေ မကြုံတွေ့စေချင်တာရယ်… ဒီကျောင်းရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမျိုး တခြားကျောင်းမှ မရှိနိုင်တာရယ်ကြောင့် ဒီကျောင်းမှာဘဲဆက်ထားရမှာပါ… စားသုံးကုန် လူသုံးကုန်တွေ ဈေးတက်နေချိန်မှာ ပညာရေးကပါဈေးလိုက်တက်တော့ တော်တော်လေး ဦးနှောက်ခြောက်ရတယ်….
ဒီတော့… အဖေကပိုက်ဆံပိုရှာဘို့ပြင်… အမေက အသုံးချွေတာဘို့ဘဲရှိတော့တာပေါ့… အသုံးချွေတာဘို့ကလဲ အစစ အရာရာ ဈေးတက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘာကိုများလျှော့လို့ရမလဲ မသိပါဘူး… ခရီးအထွက်တွေလျှော့… ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ပြည်တွင်းခရီးတွေဘဲထွက် … ပြီးတော့… ပြီးတော့… စဉ်းစားရင် အဖြေမထွက်နိုင်သေးတာမို့… ဘယ်လိုများအသုံးလျှော့ရမလဲ… လာလည်သူ သူငယ်ချင်းတို့ရေ… အကြံလေးများပေးသွားကြပါနော်…..
Posted by rose of sharon at 6:51 AM 19 comments:
(ပုံကို Google မှယူပါသည်)
ကုန်သွားခဲ့တဲ့၂၀၁၁ဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ ကောင်းခြင်းတွေကပိုများခဲ့တယ်….
မိသားစုရဲ့ ကျန်းမာရေး စီးပွါးရေးတွေလည်း အရင်နှစ်တွေထက်ပိုကောင်းခဲ့တယ်….
အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း နှစ်ကြာလာတဲ့အမျှ ၂၀၁၁ ထဲမှာ နားလည်မှုတွေပိုရလာခဲ့တယ်…
ခင်ပွန်းရဲ့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ခေါင်းထဲမိုက်ခနဲဖြစ်ဖြစ်သွားတာဟာ တခြားရောဂါတခုခုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ stress ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို ခင်ပွန်းသည်လက်ခံအောင် ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်ကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ရပြီး အနာသိသွားလို့ ဆေးရှိသွားခဲ့ရတယ်…
ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ မေမေလည်း ဆရာဝန်ရဲ့ပုံမှန်ဆေးကုသမှုခံယူရင်း အခြေအနေကောင်းအောင် ထိန်းချူပ်ထားနိုင်လို့ ဆေးရုံတက်ရတာတွေမရှိတော့ဘူး….
AaBနဲ့အတူ ကုသိုလ်ပြုအလှုတွေ တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်ခဲ့ရတာကိုကြည်နူးခဲ့ရတယ်….
ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်မိသားစုအတွက် ၂၀၁၁ဟာ အရာရာကောင်းခဲ့ပေမဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေတော့ နိုင်ငံအချို့မှာ ကျရောက်ခဲ့တယ်… ငလျှင်ဘေး ရေဘေး စစ်ဘေးတွေ ၂၀၁၂မှာကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်…
၂၀၁၂မှာပိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ Facebook လဲခုထိတော့ အိုကေနေတုန်း…
၂၀၁၂ဒီဇင်ဘာ ရဲ့ဘေးအန္တရယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလည်း ဒီနှစ်ထဲမှာ လူတွေပြောသံ သိပ်မကြားမိတော့….
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် တနှစ်ကုန်လို့ တနှစ်ပြောင်းတိုင်း နှစ်ဟောင်းက မကောင်းခဲ့တာတွေကို ထားခဲ့ပြီး နှစ်သစ်ရဲ့ကောင်းခြင်းတွေကို ခံစားချင်မိတာတော့ နှစ်တိုင်းပါဘဲ…
ပိုကောင်းတာတွေတောင့်တရင်း ကိုယ်တိုင်က ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ ဒီတနှစ်လည်း ကြိုးစားအသက်ရှင်သွားမှာပါ…
အကောင်းတွေကို မျှော်လင့်ရင်း အဆိုးတွေကြုံလာတဲ့အခါ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ရင့်ကျက်မှုမျိုးကိုလည်း ကြိုးစားရယူရဦးမယ်…
အရာရာကို အကောင်းဘက်ကမြင်တတ်အောင် ကြိုးစားရင်း မထင်မှတ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ် စိတ်ပျက်မသွားဘဲ သင်္ခန်းစာယူနိုင်ဘို့လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်လေ့ကျင့်ရမယ်…
ကဲ… ၂၀၁၂ ရေ… ကိုယ်ကတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ စိတ်ဓာတ်တွေပိုမိုရင့်ကျက်ဘို့ကို မျှော်လင့်ရင်း မိသားစုနဲ့အတူ ဘဝခရီးကိုလျှောက်လှမ်းလိုက်ပါဦးမယ်….
Posted by rose of sharon at 12:41 PM 12 comments:
စာဖတ် စာရေး ပန်းချီဆွဲတာ ဝါသနာပါတယ် ချစ်ရင်သိပ်ချစ်တတ်တယ် မုန်းရင်လှည့်မကြည့်တော့ဘူး ဘုရားပေးတဲ့ အဖိုးတန်ရတနာ သားသားနဲ့မီးမီးရှိတယ်